Fursad.com .:: फेरी तहल्का मच्चिने भो......... ::.
FlashBack	फेरी तहल्का मच्चिने भो.......... [Updated on 2012-06-19]
"राई ईज किङ्ग" उपाधी पाएका गायक राजेश पायल राई भोलि २०जुन मा विल्सन विक्रम राई र पार्वती राई संगै "हङकङ" प्रस्थान गर्दै छन् । "मेरी वास्सै" नामक चर्चित टेलिसिरीयल वाट "तक्मे बुढा"का रुपमा नेपालीहरु माझ चर्चामा आएका "विल्सन" ले त्यहाँ हङकङवासी नेपालीहरुलाई धेरै हसाँउने छन् भने "छमछमी"नामक रियालीटी शो मा पहिलो भएकी न्यृत्यङ्गना पर्वती राईले आनो कला प्रस्तुत गरी दर्शकलाई मनोरन्जन दिलाउने छिन् ।
गायक राजेश पायल राईले भर्खर बजारमा सार्वजनिक भएको ४वटा एल्वमका गीतहरु सहित आप्ाना हिट नंम्बरहरु बाट हङकङमा तहल्का मच्चाउने तयारीमा छन् ।
जुन २३मा हङकङको "हेनरी जी लेङ" हलमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रम "खोटाङ सेवा समाज हङकङ" ले आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रम समापन लगतै राजेश पायल राई २९ जुनमा कतारमा हुन लागेको अर्को सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि उड्ने छन् जसमा भोजपुरी कलाकारहरुले कला प्रस्तुत गर्ने छन् । जून कार्यक्रमका आयोजक सुवर्च देवकोटा हुन् । सम्पुर्ण कलाकारलाई सफलताको शुभकामना ।